COVID-19 dia hisy fiatraikany amin'ny drafitra fandaniam-bolan'ny mpanara-baovao Paska 91 tapitrisa
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » COVID-19 dia hisy fiatraikany amin'ny drafitra fandaniam-bolan'ny mpanara-baovao Paska 91 tapitrisa
Mikasa ny halala-tanana ny olona amin'ny fanamarinana manentana azy ireo
47% ny Amerikanina milaza fa ny fivavahana dia nanampy azy ireo hiatrika ilay aretina
Ny amerikana dia 23% kokoa no mankalaza ny paska miaraka amin'ny namana sy fianakaviana raha oharina tamin'ny taon-dasa
Ny COVID-19 dia nahatonga ny Amerikanina hankasitraka indrindra ny fianakaviany
Tamin'ny alahady paska teo akaiky teo dia navoaka androany ny valin'ny fanadihadiana tamin'ny paska. Ny fanadihadiana dia nahitana fa ny COVID-19 dia hisy fiatraikany amin'ny drafitry ny fandanian'ireo mpanara-baovao Paska 91 tapitrisa amin'ity taona ity, 47% ambany noho ny isa nisy tamin'ny taon-dasa.
Mba hahalalanao izay tanàna mampanantena fotoana faratampon'ny atody amin'ny 4 aprily, dia nampitahain'ny manam-pahaizana momba ny indostria ny tanàna lehibe indrindra 100 manerana ny metrika manan-danja 13, manomboka amin'ny fivarotana vatomamy sy sôkôlà isan-kapita ka hatramin'ny isan'ny Kristiana ao an-tanàna.
Tanàna tsara indrindra amin'ny Paka
Zava-misy sy statin'ny paska - fiangonana, vatomamy ary vola
$ 21.6 Miliara: Ny fandaniana mifandraika amin'ny Paska dia andrasana amin'ny 2021 ($ 180 isaky ny olona mankalaza).
$ 3 Miliara: Vinavinaina amin'ny fandaniana Paska amin'ny vatomamy
$ 49,000: Vidin'ny bunnà paska sôkôla lafo indrindra eto an-tany.
78%: Mizarà olona izay mihinana sofina voalohany amin'ny sôkôla.
60%: Fizarana ray aman-dreny mikasa ny handefa harona Paska ho an'ny zanany aorian'ny nifindrany.
Statin'ny lakilen'ny fitsidihan'ny Coronavirus
Mikasa ny halala-tanana ny olona amin'ny fanamarinana manentana azy ireo. Amerikana 76 tapitrisa no nilaza fa hanome ampahany amin'ny fizahana fanentanana ho avy amin'ny fikambanana ara-pivavahana iray.
Ny fivavahana dia loharanom-pampaherezana. 47% ny Amerikanina milaza fa ny fivavahana dia nanampy azy ireo hiatrika ilay aretina.
Ny areti-mandringana dia nahatonga anay hankasitraka bebe kokoa ny fianakaviana sy ny fahasalamana. Ny COVID-19 dia nahatonga ny Amerikanina hankasitraka indrindra ny fianakaviany (39%), arahin'ny fahasalamana (29%) ary avy eo ny fahalalahana (12%).
Betsaka ny olona mety mankalaza manokana amin'ity taona ity. Ny amerikana dia 23% kokoa no mankalaza ny paska miaraka amin'ny namana sy fianakaviana raha oharina tamin'ny taon-dasa.